15 Maalgelinta Hantida Guryaha ee Bilawga ah 2022 % Goobta Hantida
Bogga ugu weyn Maalgelinta Hantida Guryaha ee 15 ee Bilowgayaasha 2022
Waxaad sameyneysaa lacag aad u weyn marka aad sameysato maalgashi sax ah oo keeni kara soo celin wanaagsan. In kasta oo siyaabo badan oo maalgashi ay u jiraan, Maalgashiga Hantida Maaliyadeed ayaa ugu sarreeya shaxda sababta oo ah xeeladaha gaarka ah.
Akhri maqaalkan si aad wax uga barato Istaraatiijiyadaha Maalgelinta Hantida ee Real Estate iyo sida aad u isticmaali karto.
Sida laga soo xigtay Caawinta Franchise sannadka 2019, waxaa jiray ku dhawaad ​​210,000 oo shirkadood oo ka hawlgala dilaalinta guryaha iyo maareynta, oo soo saaray $ 200 bilyan oo dakhli ah.
Markaa, maalgelin kasta, waxaa wanaagsan inaad si fiican u barato ka hor intaadan quusin boqolaal kun oo doollar oo bilow ah.
Maqaalkan, waxaad ku arki doontaa 15 meheradood oo ma -guurto ah oo aad ku maalgashan karto bilowga sanadka 2022. Iska joog. Laakiin intaas ka hor, waad dhex mari kartaa jadwalka tusmada hoose si aad u hesho dulmar.
Sababta Looga Fiirsado Maalgelinta Hantida Ma -guurtada ah
Hantida ma guurtada ahi waa maalgashi ku habboon oo leh faa'iidooyin badan. Markaad maalgashato hantida maguurtada ah, waxaad lacag ka heshaa dakhliga, qiimo-dhaca, kobcinta sinnaanta, qaddarinta, iyo xoojinta.
Waxa wanaagsan ayaa ah in maalgelinta hantida maguurtada ahi ay tahay isku -dar ganacsi yar iyo maalgashi saafi ah. In kasta oo ay adag tahay, haddana way wanaagsan tahay in la bilaabo oo laga kobciyo maalgelinta hantida ma -guurtada ah meel xoqan.
Marka ganacsigaagu qaan gaaro, waxaad ku noolaan doontaa dakhligaaga maalgelinta maalmaha ka haray noloshaada. Taas macnaheedu waa shaqadu waxay noqotaa mid ikhtiyaari ah oo waxaad ku samayn kartaa waxa ugu muhiimsan ama waxa aad jeceshahay wakhtigaaga.
15 Xeeladaha Maalgelinta Hantida Guryaha ee Bilowga?
Halkan waxaa ah xeeladaha maalgashiga hantida maguurtada ah ee bilowga ah si ay ugu isticmaalaan bilowga
#1. Caafimaad qab
Caawinaaddu waa mid ka mid ah siyaabaha ugu dhaqsaha badan ee lagu bilaabi karo hantida maguurtada ah. Istaraatiijiyadan gaarka ahi waxay u oggolaanaysaa maalgashadayaashu inay u dhaqmaan sidii dhexdhexaadiye u dhexeeya iibiyeyaasha iyo iibsadayaasha.
Kooxahan maal -gashadayaasha ayaa tilmaami doona oo sugi doona hanti ka hoosaysa qiimaha suuqa ka dibna u wareejin doona heshiiskaas iibsadaha ugu dambeeya. Waxay lacag sameeyaan iyagoo ku daraya khidmad heshiiska ugu dambeeya.
Shaqada ugu weyn ee ixtiraamku waa in la abuuro liis wax iibsadaha oo xooggan iyo habka ay u maraan aqoonsashada kuwa wax iibsada oo xoog leh waa in ay suuqyadooda ku suuqgeeyaan emayl, warbaahinta bulshada, boostada tooska ah, iyo dhisidda liiska maalgashadayaasha xiisaynaya.
Intaa waxaa sii dheer, sababta caafimaadku ugu fiican tahay maalgashiga hantida ma guurtada ah ee bilowga ah waa inaysan u baahnayn raasumaal muhiim ah si loo bilaabo.
Ganacsigani wuxuu u oggolaanayaa maalgashadayaasha inay dhistaan ​​shabakad la isku hallayn karo oo ay samaystaan ​​faham xooggan oo ku saabsan aaggooda suuqa.
Waxaad ka akhrisan kartaa tan: Shirkadaha Maareynta Hantida ee ugu Fiican Mareykanka
Ka -hor -imaadku waa ikhtiyaar kale oo weyn oo lagu bilaabi karo maalgelinta guryaha. Si ka duwan dhaqancelin u baahan lacag si horumar weyn loo sameeyo. Mashruuca horudhaca ah wuxuu kaliya u baahan yahay casriyeyn yar.
Sidaa darteed, tani waxay meelayneysaa hanti dib -u -iibin iyadoo lagu darayo casriyeyn yar oo la isku qurxiyo sida nadiifinta, rinjiyeynta, ama beerista. Inta badan, waxay hantida ka iibiyaan maalgeliye dhammaystira dayactirka buuxa.
Xusuusnow, ujeeddada ka-hor-qabashadu waa barashada sida loo iibiyo suugada, ma aha hilibka.
#3. Maalgelinta REIT
Amaanooyinka maalgashiga hantida maguurtada ah (REITs) waa dhibco ka bood ah oo wanaagsan kuwa bilowga ah ee guryaha. Equity REITs oo ah nooca ugu badan ee caadiga ah waa shirkado leh dhul dakhli-dhaliya.
Shirkadda maalgashiga hantida maguurtada ah (REIT) waxay noqon kartaa shirkad leh oo maamusha hantida dakhli soo saarta.
Maal ka dibna wuxuu ka iibsan karaa saamiyada REIT oo wuxuu ku raaxaysan karaa faa'iidada dhulka isagoo aan lahayn hanti jireed.
Intaas waxaa sii dheer, REITs waxay aad ugu habboon yihiin kuwa bilowga ah maxaa yeelay waxay u oggolaadaan maalgashadayaasha laga yaabo inaysan diyaar u ahayn ama aan awoodin inay iibsadaan guryaha fursad ay uga faa'iideystaan ​​hantida ma guurtada ah.
#4. Jabsiga Guriga
Hacking House -ku waa mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee maalgashiga hantida maguurtada ah ee bilowga ah. Taas oo micnaheedu yahay waa inaad ogaataa hab aad gurigaaga uga kiraysan karto.
Guriga la jabsado wuxuu ku nool yahay hanti yar oo ka kooban dhowr qaybood, sida laba-dabaq, saddex-xagal, ama 4-plex. Markaa waxaad kiraysanaysaa cutubyada dheeraadka ah si aad dakhli u hesho.
Sida u kiraynta qolalka jiifka dheeraadka ah dadka la deggan, kiraynta dabaqa hoose, ama u kiraynta meel dheeraad ah RV (haddii sharciyada maxalligaagu oggol yihiin).
Si taas loo gaaro, waxaad u baahan doontaa xoogaa lacag ah maxaa yeelay waxaad heli kartaa maalgelin milkiile-guri si aad u iibsato guriga.
Hoos waxaa ah dhowr barnaamij oo amaah ah oo leh lacag -bixinno yar yar oo aad u adeegsan karto jabsiga guriga:
Amaahda FHA (3.5% hoos u dhacday)
Amaah VA (0% hoos loogu dhigay halyeeyadii)
USDA (0% ayaa hoos uga dhacday miyiga)
Amaahda caadiga ah (3% ilaa 10% hoos u dhigta caymiska guryaha)
#5. Flips Live-In House
Live-In House Flips waa mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu bilaabi karo rogista adiga oo gurigaaga u rogaya rog. Waxay ka faa'iideysataa mid ka mid ah sharciyada canshuurta ugu macaashka badan Mareykanka
Istaraatiijiyadan oo kale waxay ku shaqaysaa iibsashada guri iyo ku noolaanshaha ugu yaraan 2 5tii sanoba mar.
Markaa waad iibin kartaa guriga si macaash ah mana bixinaysid wax canshuur ah ilaa $ 250,000 shaqsi ahaan ama $ 500,000 lammaane si wadajir ah u xaraysanaya canshuuraha.
Sidaa darteed, sida xeeladaha kale, kuma imaanayso shaqo la'aan iyo halis la'aan. Laakiin sababta oo ah waxaad ku nooshahay guriga, waxaad yareyn kartaa halistaada adigoo waqtigaaga ku dayactiraya oo sugaya waqtiga ugu fiican ee aad iibin karto.
#6. Crowdfunding Real Estate
Iibsashada hantida maguurtada ah waa soo galitaan cusub oo lagu galay dunida maalgashiga hantida maguurtada ah. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku maalgeliso qaddar yar oo lacag ah (sida $ 1,000 illaa $ 5,000) oo ay weheliyaan koox maal -gashadayaal kale ah oo ah dadkii badnaa.
Maalgashiyadan tirada badan waxay noqon karaan guryo kiro ah (badiyaa guryaha waaweyn oo badan) ama amaahda maalgashadayaasha kale ee hantida ma guurtada ah (yacnii amaahda lacagta adag).
Marka istiraatiijiyadan oo kale ah, waa inaad noqotaa maalgaliye la aqoonsan yahay si aad u maalgashato.
Tan micnaheedu waa inaad leedahay hanti qiimaheedu ka badan yahay $ 1 milyan (adiga oo aan lahayn gurigaaga) iyo/ama dakhli sanadeed ka badan $ 200,000 labadii sano ee la soo dhaafay (ama $ 300,000 lammaane).
Waxaa jira aagag kale oo dadweyne badan sida Fundrise.com taas oo aan kaaga baahnayn in laguu aqoonsado laakiin xoogaa ka duwan.
Airbnb waa suuqa mega-online-ka ah oo kuu oggolaanaya inaad kiraysato gurigaaga (ama qayb ka mid ah gurigaaga) muddo gaaban. Sidoo kale, waxaad u adeegsan kartaa hab jaban oo aad ku gasho maalgashiga hantida maguurtada ah.
Dadka intooda badan, istaraatiijiyadani waxay noqon kartaa nooc khaas ah oo jabsi guri ah oo aad dakhli ka soo saarto gurigaaga ama qayb ka mid ah gurigaaga.
Laakiin waxaad sidoo kale u kori kartaa ganacsi habboon oo soo saara dakhli waqti-dhiman ah ama waqti-buuxa ah.
Farsamada-ku-dhex-Kirada-Kirada waxay la xiriirtaa jabsiga guriga. Nuxur ahaan, waxaad u soo guureysaa guri, u diyaari inaad kiraysato, ka dibna u sii ahaan kiro ahaan markaad guurto.
Si aad istaraatiijiyadan u suurta gasho, waxaad u baahan doontaa inaad iibsato guri dhaqaale badan oo sidoo kale u shaqayn doona dhaqaale ahaan kiro ahaan.
Kiro-Live-In-Then-Rent, maahan inaad la noolaato deriskaaga kiraystahaaga oo ka duwan jabsiga guriga oo aad ka faa'iidaysan karto daymaha lacag-bixinta yar-yar ee milkiileyaasha
Si kale haddii loo dhigo, samaynta kaliya 2 ilaa 4 Guryaha La-Guri-Kiraynta ah ayaa kugu dejin kara faylal-kiro oo fiican sanado badan oo soo socda.
Waxaad sidoo kale hubin kartaa tan: 20ka hantiile ee ugu hantida badan dunida
Iskaashiyadu sidoo kale waa mid ka mid ah istaraatiijiyada ugu wanaagsan maalgashiga hantida maguurtada ah ee bilowga ah
Istaraatiijiyadan oo kale waa marka aadan adigu lacag u haysan maalgashiga hantida maguurtada ah, waxaad weli ku bilaabi kartaa adiga oo adeegsanaya lacagta lamaanahaaga.
In kasta oo ay jiraan siyaabo badan oo lammaane loo noqdo, mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud ayaa loo yaqaan iskaashi amaah oo asal ahaan u shaqeeya sidan:
Helitaanka heshiis maalgashi hantiyeed oo wanaagsan.
Lammaanahaaga amaahdu wuxuu bixiyaa lacag -bixintii hore wuxuuna qaataa deyn uu ku iibsado guriga
Waxaad ka kireysaa guriga lamaanahaaga amaahda leh ikhtiyaar aad ku iibsan karto qiimo ka sarreeya.
Sidoo kale, waxaad kireysataa guriga kireyste, maareysaa dhammaan arrimaha maareynta maalinlaha ah, waxaadna haysaa farqiga u dhexeeya kirada aad aruuriso iyo kirada aad bixiso.
Kahor intaan ikhtiyaarkaaga iibsigu dhicin, waxaad heli kartaa amaah cusub si aad u iibsato guriga naftaada (waxaan rajeyneynaa ka dib markii hantida la qiimeeyo). Ama waxaad ka iibin kartaa dulsaarkaaga guriga iibsadaha cusub qiimo calaamadeysan.
Dhab ahaantii, waxaad ku xakamayn kartaa dakhliga iyo qaddarinta hantida lacag aad u yar (sida $ 100 illaa $ 1,000 khidmad ikhtiyaar ah), adiga oo kaashanaya maskaxdaada iyo xiisahaaga si aad heshiis u wada gashid.
#10. Wakiilka Guryaha
Waxaad bilaabi kartaa ganacsi dhinac ah ama shaqo waqti-buuxa ah sida wakiilka guryaha si aad u bilowdo barashada iyo kasbashada lacag.
Gobol kastaa wuu ka yara duwan yahay, laakiin caadi ahaan waa inaad horay u sii qaadataa tiro cayiman oo fasallo ah. Markaa waxaad qaadataa imtixaan dhammaystiran oo waxaad bixinaysaa khidmadda ruqsadda ee gobolka.
Intaa waxaa dheer, waxaad u baahan tahay inaad hesho xafiis kasta oo dillaaliin ah, oo aad ku qanacsan tahay si “aad u laliso liisankaaga”
Waxaad sidoo kale ku biiri kartaa ururka maxalliga ah ee Realtors -ka waxaadna bixin kartaa helitaanka Adeegga Liisaska Badan sida wakiillada badankoodu sameeyaan.
Ugu dambayntii, waxaad u baahan doontaa inaad waqti iyo tamar dheeraad ah geliso suuqgeynta jiilka hoggaaminta si aad xoogaa lacag ah u samaysato.
#11. Maalgelinta Guryaha Kirada ee Mudada Dheer
Helitaanka hanti maalgashi iyo kirayntooda oo ku salaysan muddo dheer waxay ahayd welina ka mid tahay siyaabaha ugu wanaagsan ee lacag looga sameeyo hantida maguurtada ah.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee kirooyinka dhaqameedka ah ayaa ah in maalgashade uu helo inuu lacag ku sameeyo muddada gaaban (iyada oo loo marayo dakhliga kirada) iyo muddada dheer (iyada oo loo marayo qiimeynta hantida ma guurtada ah).
Intaa waxaa sii dheer, kirooyinka muddada-dheer waxay bixiyaan ilo dakhli oo xasilloon marka lagu daro sicir-beddelka hoose waxayna u baahan yihiin maamul iyo dayactir ka yar guryaha kirada muddada-gaaban.
#12. Iibso oo Hayso
Iibso oo Hayso waa mid ka mid ah xeeladaha maalgashiga guryaha ee ugu caansan kaas oo ku habboon kuwa bilowga ah.
Istaraatiijiyadani waxay ku lug leedahay iibsashada hanti ma -guurto ah oo ay ku sii haysato muddada dheer ilaa qaddarinta dhabta ahi ay riixdo qiimaheeda ku filan si ay macno u yeelato in la iibiyo.
Qorshaha guulaysta ee leh istaraatiijiyadan hantida maguurtada ah waa in la iibsado hanti ka hoosaysa qiimaha suuqa ama suuq qabow oo la filayo inuu kululaado sanadaha soo socda.
Markaa tani waxay gacan ka geysan doontaa dardargelinta qaddarinta waxayna kuu oggolaan doontaa inaad lacag dhaqso u sameyso halkii aad ka ahaan lahayd goor dambe.
#13. Maalgelinta Iibiye
Maalgelinta Iibiyuhu waa mid ka mid ah istaraatijiyadda maalgelinta hantida maguurtada ah ee bilowga ah iyo hab lagu iibsado hantida maguurtada ah oo uu iibiyuhu "kuu noqon karo bangiga" adiga.
Halkii aad deyn ka qaadan lahayd bangiga, iibiyuhu wuxuu kugula heshiin karaa inaad guriga iibsato waqti ka dib oo aad si tartiib tartiib ah u bixiso (sida qeyb bille ah).
Ogsoonow wax kasta oo shuruudo ah oo aad kula gorgortamayso iibiyaha waa waxa aad bixiso. Had iyo jeer ma dhacdo laakiin waxaa suurtogal ah inaad kala xaajooto lacag -bixiyaha hoose iibiyaha.
Tani inta badan waxay dhacdaa haddii gurigu u baahan yahay dayactir sababtoo ah waxaad ka ganacsan kartaa shaqadaada mar uun halkii aad ka samayn lahayd lacag -bixin hoose.
#14. Istaraatiijiyada BRRRR
BRRRR waxay u taagan tahay Iibso, Dib -u -habeyn, Kiro, Dib -u -hagaajin, Ku -celcelin.
Istaraatiijiyadani waxay ku saabsan tahay iibsashada guryaha sare, hagaajin, iyo kordhinta qiimahooda.
Laakiin waxaad guriga u haysataa kiro iyo dib -u -hagaajin si aad ula soo baxdo qaar ama dhammaan lacagtaada, halkii aad iibin lahayd.
Sidoo kale, halkii aad ka bixin lahayd lacag caddaan ah kharashaadka hore ee guryaha kala duwan, waxaad si taxaddar leh dib u maalgelin kartaa si aad ula soo baxdo lacagtaada oo aad dib u warshadeyso lacagaha si aad u iibsato dhowr guri oo isku xiga.
Waa kan sida hawshu u shaqeyso
B – Iibso hanti leh awood ay ku kordhiso qiimaheeda marka la dayactiro. Caadiyan waxaad isticmaali doontaa maalgelinta gadashada muddada gaaban, sida lacag caddaan ah, khad amaah ah, lacag gaar ah, ama lacag adag.
R-Dib-u-habeyn hantida si loo kordhiyo qiimaheeda oo looga dhigo mid la kiraysan karo
R – Ijaar guriga kirayste tayo leh (ama kiraysteyaal)
R – Xisaabin isticmaalaya amaah guri oo waqti dheer ah
R – Ku celi (haddii la doonayo)
Farsamadan ayaa la adeegsanayey muddo dheer welina waxaa isticmaalaya maalgashadeyaal badan. Markaa waad hubin kartaa haddii aad u aragto istaraatiijiyadan mid xiiso leh.
Waxaad sidoo kale akhridaa tan: Hantida Soo Saarka Dakhliga Ugu Wanaagsan ee ay tahay inaad aado
#15. Heshiisyada Udgoon Dadka Kale
Udgoonida heshiisyada dadka kale waa iyada oo loo helo heshiisyo hanti ma guurto ah oo wanaagsan maalgeliye kale oo khibrad leh. Istaraatiijiyadan oo kale uma baahna lacag ama waayo -aragnimo badan si loo bilaabo.
Xaaladaha badankood, waxaad u baahan doontaa inaad haysato liisankaaga hantida maguurtada ah, si aad si sharci ah u hesho khidmadaha helaha sida eey shimbir.
Runtii tani waa qaab khaas ah oo ah wakiil hanti ma guurto ah. Markaa waxaad u baahan tahay oo keliya inaad xoogga saarto iibsadayaasha maalgashadayaasha, halkii aad xoogga saari lahayd dhammaan iibsadayaasha.
Istaraatiijiyadani waa mid aad u fudud mabda 'ahaan. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad sameyso laba shay oo aad u wanaagsan: hel heshiisyo wanaagsan oo hel lacag badan oo iibsadayaasha maalgashadayaasha firfircoon.
Hantida maguurtada ah ayaa la caddeeyay inay tahay maalgashi guulaysan waqti ka waqti. Meel kasta oo aad ka bilowdo ma jirto sabab loo xaddido hantida maguurtada ah.
Waxaa jira xeelado maalgashi oo kala duwan oo kaa caawin kara inaad ku guulaysato xirfadda mustaqbalka fog ee hantida maguurtada ah.
Markaa qaado waqtigaaga si aad wax uga barato maalgashiga hantida maguurtada ah kuwa bilowga ah ee ku jira maqaalkan oo hel xeeladda saxda ah ee adiga kugu habboon.
Sida Looga Bilaabo Meherad Maryland 2022: Hagaha Ugu Dambeeya, Tallaabo-Tallaabo
Mercari vs Poshmark waa aalado eCommerce oo cajiib ah oo dadku ay ku barwaaqoobayaan maalmahan laakiin waa kuwee kuwan…
Iyada oo ku saleysan saldhigga tamarta badan ee aan cunno, saliidda cayriin waa dabiici aad muhiim u ah…